Orinasa famonoana otrikaretina sy fanalefahana | Mpanamboatra sy mpamatsy fanafoanana ny famonoana otrikaretina Shina
Amin'ny maha ivon'ny R&D nasionaly ho an'ny famonoana otrikaretina sy fanamafisam-peo, SHINVA no singa mpamolavola lehibe indrindra ho an'ny fenitra nasionaly sy indostrialy ho an'ny fitaovana fanamorana. Ankehitriny SHINVA no ivon-toeram-pamokarana lehibe indrindra amin'ny fanaovana sterilizing sy famonoana otrikaretina. SHINVA dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO9001, CE, ASME ary ny rafitra fitantanana sambo tsindry.
SGL andian-dahatsoratra ankapobeny etona sterilizer mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fenitra GMP ary be mpampiasa amin'ny fanamorana ny fitaovana, fitafiana tsy misy ilana azy, mpanakan-dabo, kapila vita amin'ny aluminium, akora simika, sivana ary media eo amin'ny sehatry ny injeniera pharmaceutika, fitsaboana sy fitsaboana ara-pahasalamana, biby. laboratoara sns.
YQG Series mpanasa fanafody
Ny mpanasa GMP dia novolavolain'ny SHINVA araka ny GMP farany ary afaka manasa, manasa, manasa ary mamainina. Ny dingan'ny fanasana dia azo averina ary voarakitra, ka afaka mamaha tanteraka ny kalitaon'ny fizotran'ny fanasan-tanana. Ireo mpanasa andiany dia mahafeno ny fepetra takian'ny FDA sy ny EU.
GD Series Heat Sterilizer hafanana
Ny sterilizer ny hafanana maina dia ampiasaina amin'ny fanamorana ny fitaovana avo lenta. Mampiasa rivotra mafana mivezivezy izy io ho toy ny haino aman-jery miasa ho an'ny fanamorana sy fanalefahana ny jiro ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny GMP Shinoa, EU GMP ary FDA. Atsofohy ao anaty efitrano ny lahatsoratra, atombohy ny tsingerin'ny sterilization, avy eo dia miara-miasa amin'ny fanafanana haingana ny fantsom-panafody, ny fantsom-panafanana ary ny valva-drivotra. Miaraka amin'ny fanampian'ny mpankafy mivezivezy, ny rivotra mafana maina dia mikoriana mankao amin'ny efitrano amin'ny alàlan'ny hafanana avo lenta mahatohitra HEPA ary mamorona onjam-peo mitovy. Ny hamandoana ambonin'ireo lahatsoratra dia alaina amin'ny rivotra mafana maina ary avy eo dia esorina amin'ny efitrano. Rehefa mahatratra sanda iray ny mari-pana amin'ny efi-trano dia mikatona ny valizy. Ny rivotra maina maina mivezivezy ao amin'ny efi-trano. Miaraka amin'ny fidiran'ny rivotra madio miserana, ny efi-trano dia misy tsindry miabo. Rehefa tapitra ny dingana fanamafisam-peo dia misokatra ny rivotra madio na ny valizy miditra amin'ny rivotra. Rehefa milatsaka amin'ny sanda napetraka ny maripana dia mikatona ny valves mandeha ho azy ary misy fanairana maheno sy maso anehoana ny varavarana misokatra.